Mozeantsaina: Nahoana isika no tokony hikajy ireo fiteny tandindonin-doza · Global Voices teny Malagasy
Mozeantsaina: Nahoana isika no tokony hikajy ireo fiteny tandindonin-doza
MpanoratraAnna Luisa Daigneault
Voadika ny 07 Novambra 2019 15:16 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Italiano, Español, русский, Français, Esperanto , Português, English, Filipino, नेपाली, عربي, English
Eranti Dolbera dia mpitondratenim-poko iray ahiana ho lany tamingana fantatra amin'ny hoe Lanjia Sora, itenenana ao Rapjingtal, India. Saripika avy amin'i Opino Gomango ho an'ny Living Tongues Institute for Endangered Languages ary ao anatin'ny tetikasam-pandraketana Sora. Nahazoana alalana.
Ho fiaraha-mahatsiaro ny taona iraisampirenena napetraky ny Firenena Mikambana ho an'ny fiteny Indizeny (IYIL 2019)
Lasa tsy himpody intsony tamin'ny 4 janoary 2019, teo amin'ny faha-86 taonany Rtoa Dora Manchado, farany amin'ny mpiteny Tehuelche. Fanta-daza teo amin'ny vondrom-piarahamonina niaviany tao Patagonia izy, ary notiavin'ny maro. Niara-niasa tamin-dRtoa Manchado nandritra ireo andro farany niainany teto an-tany i Javier Domingo, antrôpolôgy sady mpahay fiteny, nandrakitra ny kabariny ary lasa namany akaiky. Tamin'ny fahalasanany, nanamarika izy “Nohajaina ho ‘mpiteny farany’ ny Tehuelche sy fanahin'ny famantarana sy fifohazana Tehuelche i Dora Manchado. Fantany tsara fa tsy momba ny fifandraisana ihany izany fiteny izany fa misy koa fitokisana, fiaraha-manakona […] ary fizaràna amin'ny hafa. Noho ny fandraketana nataony, efa manana fahafahana ankehitriny ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina, raha tiany, ny hijoro amin'ny lasany sy handrafitra indray ny mari-panondroany.”
Fantatra ao an-toerana hoe aonekko ‘a’ien, eo ampelatanan'ny mpikatroka ao amin'ny vondrom-piarahamonina ampolony maro tao Pantagonia, izay mitady ny hamelomana ny fiteny amin'ny alalan'ny fihaonana, fiarahan'ny vondrona mianatra ary ny asam-pirobohana amin'ny kolontsaina ankehitriny ny hoavin'ny Tehuelche. Saingy mbola manjavozavo ny hoavin'ny Tehuelche rehefa tsy misy miangana intsony ny mpiteny haingana aminy.
Nahoana no zava-dehibe ny fiteny?
Ny fiteny no fanehoana velon'ny tantaran'ny zanakolombelona eto amin'ity planeta ity. Miampita vanim-potoana tahaka ny karipetra mikopakopaka miaraka ireo taranaka, ny fiteny no mamindra ireo fahendrena nangonina mifandraika amin'ny fakana volontany sy fianganànan'ny olombelona. Entin'izy ireny ny torohay miankina aman'aina amin'ny fitantanana ny tany, tondrozotra kely indrindra ivelomana, fihavanana (tetiharana) ary ny fifandraisana ara-piarahamonina, fombafomba ao an-toerana, fianarana izao hita maso rehetra izao ary izay tsy voatanisa. Samy manana ny fomba fijeriny tsy manampaharoa amin'ny fandikana na fitondrana ny zavaniainan'olombelona ao anaty tokotany ara-kolontsaina sy tontolo iainana manokana ny fiteny tsirairay. Mivoatra hatrany ny fiteny—ireny no mozean-tsaina naely. Tsy hoe tsy miova izy ireny; mandray sy miova hatrany izy ireny, miankina amin'ny filam-pitenenan'ny mpiteny sy ny tokotanim-tsosialy.
Samy manana ny fitsipika ny fitenin'olombelona tsirairay, manana ny feony sy ny fomba fandrafetana torohay hanamoràna ny fifandraisana sy ny fahatakarana. Tsy hoe lopy iray ijeren'ny olona iray izao tontolo izao ihany ny fiteny, fa fiara iray ampiasaina hatrany handehanana ao aminy. Varavarambe miditra mankany amin'ny fandraisan'ny olombelona sary an-tsaina ny fiteny. Fomba fitenenana, poezia, tononkalo – azo atao daholo izany rehetra izany noho ny hery fanehoan'ny fiteny. Ohabolana, fiteny ary vazivazy no mampiseho ny fifangaroana ao amin'ny kolontsaina iray amin'ny alalan'ny gadona, rima ary fiatoana. Mihoatra ny androm-piainan'olona iray ny fahafaha-mamorona ao amin'ny fiteny. Ny feon'ny fanahy iraisana no miaina sy maty ao amin'ny mpiteny tsirairay. Raha tafita any amin'ny taranaka maromaro amin'ny mpiteny azy ny fiteny dia mbola velona ny fanahiny. Rehefa tsy itenenana sy ampitaina intsony ny fiteny iray dia manjavona ihany koa ny mahaizy azy. Raha vao tsy misy ny fandraketana azy hatrany dia ho kely ny porofo tavela fa nisy ilay fiteny.
Fiteny maro dia maro, fotoana kely loatra
Mihoatra ny 3000 ny fiteny ahiana eto amin'izao tontolo izao, maro amin'izy ireny no mety hanjavona amin'ny taona 2100, na alohan'izany. Raha voajanahary amin'ny fiteny ny ho tonga sy ny ho lasa, dia miaina ao anatin'ny fotoana mampihena ny fimaroam-piteny isika amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana natao vao haingana no manondro fa misy fiteny iray lany tamingana isaky ny telo volana sy tapany, izay midika fa imbetsaka ao anatin'ny taona iray no misy mpiteny farany ilay fiteny no maty, ary tsy misy ny mpiteny vaovao mandray ny toerany. Rehefa lasa ny fiteny iray, dia sarotra ny mamerina azy, fa tsy hoe tsy azo tanterahana. Azo tanterahana amin'ny alalan'ny fitaovana natao vakoka sy noraketina ny fandrafetana indray sy ny famohazana ny fiteny.
Nahoana no maty ny fiteny? Misy fizotra mifaningotsingotra araka ny tantara, ny jeografia ary ny sosialy sy toekarenan'ny toerana iray ny fiovam-piteny sy fahafatesam-piteny. Ho an'ny fiteny tsirairay sy ny tenim-paritra ao aminy, samy hafa ny tantarany, fa mitovitovy ny singa mandrava azy.
Mifandraika amin'ny fahaverezana mari-panondroan-drazana, vokatry ny fanjanahantany maharitra dia maharitra, ny famoretana tsy mety mitsahatra ary ny fitelemana ny kolontsain'ny vondrona mahery ny maha-amin'ny toerana mampididoza ilay fiteny. Ny fianganànan'ny fiteny koa avy amin'izany dia fiangànan'ny kolontsaina sy fampitana avy amin'ny taranaka iray mankany amin'ny manaraka. Saingy ho sarotra ny handresy ny havesatry ny fanaziogàna avy amin'ny tafiky ny mpanjanatany, ny fanesorana amin'ny tena ny tany navelan'ny razana ho an'ny tena sy ny singa hafa toy ny areti-mifindra sy ny sandan'ny ady. Mandray anjara amin'ny fahasimban'ny fiteny ihany koa mandritra ny fotoana lava ny fiantraika ratsin'ny politikam-panavakavahana volonkoditra sy fanilikilihana izay te-hampikatso ny fimaroana ara-kolontsaina sy fitenenana ho fanomezam-bahana mari-panondroam-pireena iray tafaray eo ambanin'ny fitteny iray na vitsy.
Ny fiteny eo imason'ny vahoaka
Miaina ao anatin'ny fotoana saropady isika ho fikajiana ny fiteny. Raha misy ny ezaka mateza an-kianja, fanohanam-bahoaka (sa fanjakana?) ary ny famatsiam-bola ho fanazarana hiteny sy ireo programa hilomana aminy, ny fahitana [azy] ao amin'ny fampitam-baovao, ary ny satam-pankatoavana avy amin'ny governemanta federaly sy ao an-toerana (fiadidiana), mety hanam-bintana ihany ny fiteny amin'ny famadihana ny fitsontsorika (fitotongana] ho amin'ny fahamarinan-toerana. Ny fampatezàna fiteny tandindonin-doza dia mampiditra ny fanovana ny fomba ijerena ireo mpiteny ireo fiteny ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy, ny fomba hanomezana endrika ny fiteny ao amin'ny fampitam-baovao ao an-toerana sy mahasahana ny firenena, ary ny fomba hanomezan'ny governemanta lanja azy.
Zo fototra ny fiteny ary vato fanorenan'ny fahamaroan'ny mari-panondroana ara-kolontsaina eo amin'ny zanak'olombelona. Raha miteny amin'ny fiteny iray manjaka tsy midika hoe mitsahatra amin'ny zony hitazona sy hampiroborobo ny fitenin-drazany ny vondrom-piarahamonina. Saingy ho an'ireo fiteny sasany izay efa lasa daholo ny mahay miteny haingana ilay fiteny, ny fananana fandraketana mifandraika amin'izany no lakilen'ny famelomana azy indray.
Eo amin'ny fiteny Tehuelche izao, ny fandraketana nataon-dRtoa Manchado no manome varavarankely mankany amin'ny lasa, sy mametraka lasitr'asa ho amin'ny famohazana indray ny fiteny Tehuelche eo amin'ny vahoakany. Tamin'ny iray amin'ireo alina faramparany niasany niaraka tamin'ilay anthropology Javier Domingo, nilaza Rtoa Manchado, “Aio t nash ‘a’ieshm ten kot ‘awkko” – angamba hisy olona hiteny Tehuelche rahampitso.
6 andro izayOseania